मानव सेवा नै धर्म हो::Online News Portal from State No. 4
मानव सेवा नै धर्म हो
झट्ट सुन्दा कति आनन्द आउँछ मानव सेवानै माधव सेवा हो भन्ने भनाइ । तर साँच्चै मानव सेवा गर्न सजिलो छ त ! अहिले यस्तै यस्तै कुराको बारेमा बेला–बेलामा बहस भएको सुनिन्छ । समाजको जो कसैलाई सोध्नुस् भबिष्यमा तपाईंले के गर्ने बिचार गर्नुभएको छ भन्यो भने उसले दिने सहज जवाफ भनेको समाजसेवा गर्ने, मानवीय सेवा गर्ने भन्ने नै सुनिन्छ । हो यो एकदमै सकारात्मक सोच हो यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले समाजका हरेक मान्छे भबिस्यमा सुख पाउनको लागि बर्तमानमा दुःख कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । साँच्चै भन्ने होभने अहिले कसैलाई एकछिन पनि फुर्सद छैन सबबै आफ्नो कामकाजमै व्यस्त छन् । नेपालीको दैनिकी पनि अहिले यस्तै हुन थालेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
साँच्चै यतिबेला ठाउँ ठाउँमा मानव सेवा आश्रम संचालन गरेर सडकमा यत्रतत्र छरिएर रहेका मानवलाई त्यहाँबाट ल्याएर आश्रममा सेवा दिन्छु भन्न जति सजिलो छ त्यसलाई ब्यबहारिक रूपमा उतार्न धेरै गाह्रो छ बिषय हो । हो साँच्चै धन बिनाको मन ठुलो कि मन बिनाको धन भन्ने कुरा सुनिन्छ । साँच्चै के ठुलो कुन ठुलो भन्ने बारेमा बहस गरेमा यसलाई पुष्टि गर्ने आफ्नो आफ्नो तर्क छन् तर मेरो बिचारमा भन्नू पर्दा सबैभन्दा ठूलो कुरा मन नै हो मन भन्ने कुरा पनि अचम्मको छ । जसलाई हलुका बनाउन सक्यो भने यो फूल भन्दापनि हलुका बन्न सक्छ, साँच्चै मनलाई कथोर बनाउने हो भने ढुङ्गा भन्दापनि सार्हा पनि मनन नै हुन्छ ।
अहिले बागलुङ जिल्लामा पनि केही बर्ष अगाडिदेखि मानव सेवा आश्रमको आठौ शाखा संचालनमा आएको मात्रै छैन यो निरन्तर रूपमा मानवीय सेवामा समर्पित भएर लागेको छ । सर्वप्रथम त यो संस्था चलाउने टिमलाई सलाम ठोक्नै पर्छ । मात्रै कुरामा समाजसेवा गर्न धेरै सजिलो छ तर काम नै गरेर देखाउने भन्ने अलग कुरा हो । साँच्चै सडकमा छरिएर रहेका मान्छेहरू जो हिजो घरपरिवारबाट तिरस्कृत भएर सडकमा आउन बाध्य भए पछि यिनीहरू सडकमा आएपछि समाजलाई बाधक बने न त परिवारले नै वास्ता गर्छ न त सरकारले नै त्यस्तो मान्छेलाई हेर्ने जिम्मेवारी लिने गरेको छ । यस्तो समयमा सडकमा रहेका यस्तै मानवको उद्दार गरेर आश्रममा ल्याएर लालनपालन मात्रै हैन सेवा दिएर राख्ने भन्ने कुरा कम चुनौतीको बिषय हैन ।
अहिले मानव सेवा आश्रम बागलुङ शाखामा एकजना बहिनी सुमिरा लामा संस्था स्थापना भएपछि मानवीय सेवामा समर्पित भएकी छिन् । साँच्चै मान्छे जन्मिन्छ मर्छ त्यो मान्छेको दैनिकी नै हो संसारमा जन्मिए पछि मान्छेले कसरी दाम कमाउने कसरी सुख सयल गर्ने भन्ने गरिरहेको समयमा आफ्नो घर परिवार पढाई लेखाइ सबै इच्छा आकांक्षालाई तिलान्जली दिएर मानव सेवामा समर्पित हुनु भएको छ । यसकै कारणले आज आश्रम ढुक्कसँग चलिरहेको छ । अहिले समाजमा मानव सेवामा मैले थोरै भएपनि योगदान गर्नुपर्छ है भन्ने भावनाको बिकास पनि बागलुङ सदरमुकाममा खुलेको आश्रमकै देन हो भन्ने कुरा यहाँ भनिरहन आबश्यक छैन जस्तो लाग्छ । अहिले हरेक दिन एकजना हैन एकजना महानुभावले १ किलो चिनी २ किलो चामल दाल नुन तेल थोरै भए पनि नगद सहयोग गर्दै आउनु भएको छ । साँच्चै मन नै सबैभन्दा ठुलो भगवान हो भन्ने लाग्छ ।
मान्छेले धर्मको कुरा गर्छन् धर्म भनेको राम्रो गर्नु धैर्य गर्नु हो भन्ने लाग्छ आफुभन्दा कम भाग्यमानी लाई आफ्नो तर्फबाट धेरै थोरै सहयोग गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । अहिले बागलुङ सदरमुकाममा रहेको आश्रम नेपालकै राम्रो आश्रममा गणना हुन थालेको छ । यसलाई जिल्लाबासीले गौरब गर्ने ठाउँ पनि बनेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने बागलुङ शाखामा रहेर दिनरात नभनी मानवीय सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्दै आउनु भएको सुमिराको मनलाई साँच्चै भगवानले हृदय स्पर्शि बनाइ दिएको हो । मनलाई कमलो बनाई दिएको हुनाले अहिले बागलुङको सडकमा भौतारिरहेका आमाबाबा, सानासाना बाबुनानीले एउटा घर पाएको छ एउटा परिवार पाएको छ । यसको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको यहीँ हो जस्तो लाग्छ ।
समाजमा आश्रम खोल्नु ठूलो कुरा हैन सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको आफ्नो बाबा आमा मात्रै हैन परिवारको जो कसैलाई पनि सडकमा छोड्ने वातावरणको अन्त्य गर्न जरुरी छ । यसलाई सबैले चेतनाको रूपमा अगाडि बढाउन सके यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने निश्चित देखिन्छ । आज सुमिरा जस्तो मान्छेलाई भगवानले यहाँ नपठाएको भए सायद हामीले चाहेर मात्रै आश्रम चलाउन धेरै गाह्रो पर्ने थियो । आज हेटौंडादेखि आएर बागलुङ जस्तो ठाउँमा बसेर जुन मानवीय सेवा गर्नु भएको छ यसको जति नै प्रसंसा गरेपनि कमनै हुन्छ ।मानव सेवा गर्छु भनेर हुने कुरा हैन भन्न जति सजिलो छ गर्न निकै गाह्रो छ । आज हामीले एकजना सुमिरा पाएका छौ साँच्चै हामीले समाज परिवर्तन गर्ने होभने सयौं सुमिरा जन्माउन सक्यौं भने मात्र असाह्यलाई सहारा मिल्ने थियो ।